हरियो चुरा पोते मेहेन्दीमा हिमानी (हेर्नुहोस भिडियो/फोटो !)
काठमाडौँ : हरिया चुरा, पोते र हातमा मेहन्दी – आफ्नै नामबाट समाजसेवाका लागि खोलिएको ट्रस्टले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको भेषभुषा साउनमा देखिने अरु महिलाकै जस्तै थियो। निर्धारित समयभन्दा करिब १ घण्टा ढिला ट्रस्टकै कार्यालय बालुवाटारमा कार्यक्रम सुरु भयो। कार्यक्रमका लागि आफ्ना दुई सहयोगीसहित हिमानी कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै फोटो पत्रकारहरु अघि बढे। धडाधड क्यामेराका फ्ल्यास बल्न थाले। हिमानी अलि नर्भस जस्तै देखिइन्। नमस्ते गर्दै ‘थ्याङ्क यु’ भनिरहिन्।
‘हाम्रा कामहरु कस्तो लागिरहेको छ, हाम्रा कमजोरीहरु पनि भन्दिनुस् भनेर तपाईँहरुलाई बोलाएका हौँ,’ उनकी सहयोगीले कार्यक्रम आयोजनाको उद्देश्य प्रष्ट्याउन खोजिन्। तर पत्रकारहरुले भने राजनीतिक टिप्पणीको अपेक्षा अन्तिमसम्म पनि गर्दै रहे। ‘राजनीतिसँग हिमानी ट्रस्टको कुनै सरोकार छैन,’ हिमानीको दायाँ पट्टी रहेकी सहयोगीले प्रष्ट पार्न खोजिन्, ‘हामीले हिजोका पत्रपत्रिकाहरु पनि हेर्‍यौँ। उहाँहरुले आ-आफ्नै हिसाबले आजको कार्यक्रमको व्याख्या गरिरहनुभएको छ। संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएको समय संयोगले मात्र जुरेको हो। हामी तपाईँहरुसित पहिले नै कुरा गर्न चाहन्थ्यौँ।’ तर पत्रकारहरु के मान्थे ! जनताकै रुपमा भए पनि भन्दिनुस् न त। तपाईँलाई व्यक्तिगत रुपमा कस्तो लागेको छ? अहिले यत्रो कुरा आइरहेको छ, हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्र….
उनी सकेसम्म पन्छिन खोज्थिन्। ‘जनताको जे हो त्यही हो,’ हिन्दु राज्यबारे राय सोध्दा उनले कुटनीतिक जवाफ फर्काइन्।व्यक्तिगत धारणा राख्न एकदमै अनकनाएकी हिमानीले ‘संविधानको मस्यौदामा त्रुटी छ भने सच्याउनु पर्छ’ भनिन्। पहिलो पोस्ट ।